जता पनि ठिक्क प्रियंका
सम्‍पूर्ण आइतवार, पुस २३, २०७४ 685 पटक पढिएको
काठमाडाै : यस्तो लाग्छ प्रियंकाले भएभरका हिरोसँग रोमान्स गर्ने कसम खाएकी छिन्। त्यसैले आफूभन्दा सानो उमेरका हिरो हुन् वा आफूभन्दा दोब्बर उमेरका, जोडी बाँधेकै छिन्। एकातिर प्रियंका दीपकराज गिरीसँग नाचेको गीत सार्वजनिक भइरहेको छ त अर्कोतिर प्रदीप खड्कासँग नाचेका फोटा सार्वजनिक भइरहेका छन्।
प्रियंकाले प्रदीप खड्काको मुख्य भूमिका रहेको ‘लिलीबिली’मा पाँच वर्षको बच्चाको आमाको भूमिका निर्वाह गर्न लागेको चर्चा थियो तर सुटिङ सक्ने बेलामा निर्माण टिमले टर्कीको इस्तानबुलमा प्रियंका र प्रदीपले गीतको सुटिङ गर्दै गरेका तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन्। तस्बिरमा प्रियंका र प्रदीपको जोडी नसुहाएको प्रष्ट देखिन्छ।
औसत लुक्सका बावजुद पनि प्रियंका टिक्नुको रहस्य उनको मेहनत नै हो। कामप्रति उनको समर्पणमा कुनै शंका छैन। तर, कुन भूमिका गर्ने र नगर्ने भन्ने कुरामा प्रियंकाले ध्यान नदिँदा उनले फिल्मको संख्या त बढाएकी छिन्, आफ्नै स्तर बढाउन सकेकी छैनन्। पहिले नआएको बुद्धि अब के आउला ?
आर्थिक सहायतामा छानबिन माग, फेरि थपियो ३४५ जनाको सूची 649
महिलाको शव फेला 87
फिर्ता भएका माओवादी मन्त्री अझै सरकारमा ! 318